कसरी छाता हामीलाई गर्मी बाट बचाउँछ
कसरी छाता हामीलाई गर्मी बाट बचाउँछ हामी शुरु मा जान्दछौं, छाता चीन बाट बाहिर आउँछ, यो कागज र बांस संग बनाउँछ। तेल कागज संग सुधार बरसात को दिन pretect गर्न को लागी, र सूर्य यति सजिलो छैन तेल कागज को माध्यम बाट जान्छ, कि कसरी एक छाता हामीलाई गर्मी बाट बचाउँछ। नवीनता पछि, मानिसहरु ...
कुन राम्रो एल्युमिनियम वा इस्पात छाता हो?
कुन राम्रो एल्युमिनियम वा इस्पात छाता हो? यदि तपाइँ एल्युमिनियम र इस्पात छाता संग तुलना जान्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ दुई छाता को अधिक जानकारी जान्नु पर्छ। एल्युमिनियम: सबैभन्दा टिकाऊ र पोल सामग्री विकल्प को बहुमुखी, एल्युमिनियम जंग प्रतिरोधी र धेरै बलियो छ। इस्पात: सेन्ट ...
कसरी चीन मा छाता गुणस्तर
21-08-13 मा व्यवस्थापक द्वारा
विश्वको छाता को कति प्रतिशत चीन मा बनाइन्छ? २०१३ मा चीन छाता निर्यातको विश्वव्यापी शेयरको अनुमानित% २ प्रतिशतको साथमा विश्वव्यापी रुपमा छाताहरुको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता थियो। बेल्जियम र जर्मनी 2008-201 बाट विश्वव्यापी छाता आपूर्ति को सब भन्दा छिटो बढ्दो दर को प्रतिनिधित्व गर्दछ ...
कोभिड 19१ V खोपको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्न
21-08-12 मा व्यवस्थापक द्वारा
के यो COVID-19 खोप लिन सुरक्षित छ? हो। सबै हाल अधिकृत र सिफारिश गरिएका COVID-19 खोपहरु सुरक्षित र प्रभावकारी छन्, र CDC ले अर्को खोप को सिफारिश गर्दैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय कोभिड -१ vacc को खोप जतिसक्दो चाँडो लिनु हो। व्यापक टीकाकरण एक आलोचक हो ...
तपाइँको छाता ब्रान्ड कसरी निर्माण गर्ने
कसरी तपाइँको छाता ब्रान्ड निर्माण गर्न को लागी एक छाता ब्रान्ड एक एकल नाम र लोगो हो कि दुई वा बढी सम्बन्धित उत्पादनहरु मा फरक फरक आवश्यकताहरु को सेवा मा छ। उदाहरण को लागी, हेन्ज एक छाता ब्रान्ड हो किनकि नाम विभिन्न उत्पादनहरु जस्तै केचप, सरसों, सिरका, सेम, र अधिक मा छ। छाता ब्रान्ड ...
कसरी एक छाता काम गर्दछ
एक छाता कसरी काम गर्दछ? छाता को प्रत्येक भाग को क्रम मा यो कार्य गर्न को लागी आवश्यक छ। धावक स्ट्रेचर विस्तार गर्न माथि जान्छ, जुन बारी मा, पसलहरु को बिरुद्ध धक्का। यसले एक बल सिर्जना गर्दछ जुन पूर्ण रूपले चन्दवा विस्तार गर्दछ, र एक तालाबन्दी संयन्त्र संग, यो ठाउँ मा सुरक्षित गर्दछ। उम तल हेर्नुहोस् ...
एक पारदर्शी बुलबुला स्पष्ट छाता कसरी छनौट गर्ने
स्पष्ट छाता सबै राउन्ड दृश्यता को लागी शानदार छन्। बुलबुला, गुम्बज वा चरा पिंजरा छाता को रूप मा पनि जानिन्छ, हामी ज़ियामेन चीन मा छाता निर्माता हो। तेसैले तपाइँ एक कारखाना को आवश्यकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पनी निजीकृत स्पष्ट छाता। यस्तो अवस्थामा एक स्पष्ट छाता को उपयोग को लाभ यो हो कि तपाइँ ...
सर्वश्रेष्ठ र प्यारा बच्चाहरु छाता
वर्षाले तपाइँको बच्चा लाई रमाईलो गर्न बाट रोक्दैन जब ऊसँग प्यारी छाता हुन्छ। तर कसरी बच्चाहरु लाई एक cutest र गुणस्तरीय छाता खोज्न मद्दत गर्ने? यो हुन जान्छ कि तपाइँ फेसन वा प्रकार्य को बीच छनौट गर्नुभएको थियो। अब, त्यहाँ मनमोहक, रमाईलो, आमा द्वारा अनुमोदित बच्चाहरु को छाताहरु छन् कि वास्तव मा प्राप्त ...
कस्टम छाता के हो?
उपहार दिने सही जन्मदिन उपहार, वार्षिकोत्सव उपहार, वा तपाइँको वफादार ग्राहकहरु को लागी उपहार बनाउनुहोस्। ब्यापार पदोन्नति एक कस्टम छाता मा तपाइँको व्यापार को नाम र लोगो र ध्यान र नयाँ ग्राहकहरु लाई तपाइँ जहाँ जानुहुन्छ लाई आकर्षित गर्नुहोस्। आत्म अभिव्यक्ति अद्वितीय र अद्वितीय संग तपाइँको आफ्नै कस्टम छाता डिजाइन ...
कसरी तपाइँको आँगन को लागी सर्वश्रेष्ठ छाता छनौट गर्ने
कसरी तपाइँको Patio को लागी उत्तम छाता छनौट गर्न को लागी सूर्य को कठोर किरणहरु बाट तपाइँको परिवार को रक्षा, एक दिउँसो चमक बाट तपाइँको आँखा ढाल, र एक आँगन छाता को सरल थप संगै sweltering गर्मी को गर्मी बाट एक राहत पाउनुहोस्। तपाइँको स्पा को लागी सबै भन्दा राम्रो छाता खोज्न को लागी यो गाइड पढ्नुहोस् ...
एक इन्द्रेणी आशा
कोभिड 19१ of को प्रभाव संसारभरि बाधक छ। हामी आशा गर्छौं कि सबैले यो कभर गर्न सक्छन्, र एक उज्ज्वल इंद्रधनुष भविष्य छ। हामी जान्दछौं इंद्रधनुष छाता बजार मा सबैभन्दा लोकप्रिय र तातो बिक्री हो, बच्चाहरु को लागी विशेष। र हामी यस बर्ष खुला रेनकोट लाइन छ, त्यसैले हामी इन्द्रेणी छाता उत्पादन गर्न सक्छौं र ...
तातो गर्मी आउटडोर छाता
हामी जान्दछौं गर्मी को दिन छाता को आवश्यकता छ। तातो गर्मी को दिन को लागी, वा सधैं अस्वीकार्य वर्षा हामी एक छाता हुनु पर्छ। र यदि तपाइँ तपाइँको परिवार संग समुद्र तट मा जान चाहानुहुन्छ, समुद्र तट छाता वा पालहरु सबै भन्दा राम्रो छनौट हो। हामी tassels संग समुद्र तट छाता अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ, पनी तपाइँको मुद्रण गर्न सक्नुहुन्छ ...
कस्टम लोगो छाता, Windproof यात्रा छाता, बाहिरी तह, निजीकृत छाता, कस्टम छाता, वर्षा छाता,